Hanqinni Talaallii COVID-19 Kan Biyyoota Hiyyeeyyii Akka Furamu Addunyaan Duroome Akka Deggeru Gaafatame
Prezidaant Joo Baayiden dhiyeessii talaallii COVID-19 babal’isuuf gumii waamu jedhamee kan eegamu ta’uu sabaa himaaleen Ameerikaa ibsanii jiran. Gumiin sun xumura baatii kanaa ennaa gumii walii galaa kan tokkummaa mootummootaa geggeessama. Washington Post akka gabaasetti mata dureen gumii sanaa, biyyoota guddataa jiran keessatti kan hanqate lakkoobsa talaallii dabalanii, rakkoo fayyaa kana waliin ta’anii furuu fi akkasumas wal caalmaa jiru hambisuuf hoogganoota addunyaa waliin hojjechuun barbaachisaa dha kan jedhu.
Yunaayitid Isteetis fi biyyoonni durooman ka biroon weerarri kun naannoo addunyaatti miidhaa dhaqqabsiisaa waan jiruu fi vaayiresichi bifa haaraan deebi’ee dhufuun Yunaayitid Isteetisii fi biyyoonni durooman kanneen biroon biyyoota hiyyeeyyiif talaallii COVID-19 akka gumaachaniif dhiibbaa irra kaa’ee jira.
Hoogganaan WHO Teedroos Adaanoom biyyoonni dureessa ta’an biyyootiin hiyyeeyyiin humna talaallii COVID-19 fudhatamee cimsu hanga xumura waggaa kanaatti kennuu dhiisanii biyyoonni hiyyeeyyii ta’an talaalli kana akka argatan carraa akka kennan gaafataniiru.
Teedroos duraan talaallii Ccovid-19 kana dura fudhatame cimsuuf kennamu hanga baatii Fulbaanaatti akka hin kennamne biyyoota dureeyyii gaafatanii turan.